Kwakutheni ukuze uYesu aqalekise umkhiwane? Fumanisa i-Intanethi ▷ ➡️ kwi-Intanethi
Kwakutheni ukuze uYesu aqalekise umkhiwane? Abantu abaninzi bayamangaliswa kukuva ukuba ukuzaliswa luthando olungaka njengoko uYesu wayenako uqalekise umkhiwane ukuze uwonakalise. Nangona kunjalo, Wonke umsebenzi weNkosi unenkcazo engaphantsi into ekufuneka sijonge kuyo ukuze siqonde umyalezo wayo.
En onke amazwi nezenzo zikaYesu zazinenjongo, kwaye xa wayeqalekisa umkhiwane kwakungekho kwahlukile. Ngalo mqondiso ulula wasithumela into engaphaya kokuba kufuneka sifunde ukuba sifuna ukwazi ingcinga eyiyo kaThixo. Ngaba uyafuna ukwazi ukuba yintoni?
1 Kwakutheni ukuze uYesu aqalekise umkhiwane? Inkcazo
1.1 1. Abo bathandaza ngokholo baya kuyibona imimangaliso
1.2 2. Abo bangavelisi ziqhamo baya kohlwaywa
Kwakutheni ukuze uYesu aqalekise umkhiwane? Inkcazo
UYesu akazange awuqalekise umkhiwane ngenxa yengqumbo okanye umsindo, Wenza njalo sinike isifundo sobomi. Kodwa ukuqonda ukuba wawuyintoni umyalezo, sifuna ukucacisa ibali elipheleleyo:
Ngosuku olulandelayo emva kokungena kwakhe ngoloyiso eYerusalem, wayehamba kwaye elambile. Waya kumthi womkhiwane onamagqabi wakhangela abantwana bakhe. Nangona kunjalo, akafumananga nto wayiqalekisa ukuze ingaze iphinde ivelise iziqhamo. Umhala olandelayo umkhiwane womile bamangaliswa abafundi bakhe, ngenxa yokuba umkhiwane wome ngokukhawuleza okukhulu.
Uthe ngengomso, bakubon 'ukuba baphumile eBhetani, walamba.
Wabona mgama umkhiwane onamagqabi, waya kukhangela ukuba angafumana nto na kuwo; akufika kuwo, akafumana nto, kwakuphela ngamagqabi; kuba belingelilo ixesha lamakhiwane.
Waphendula uYesu wathi kuwo umkhiwane: “Ungaze utye nasiphi na isiqhamo kuwe. Beva ke abafundi bakhe.
UMarko 11: 12-14
Ngaphantsi kwale meko, uYesu Ndithumela imiyalezo emibini kubafundi bakhe:
1. Abo bathandaza ngokholo baya kuyibona imimangaliso.
2. Abo bangavelisi ziqhamo baya kohlwaywa.
Ngoku uyazi ukuba siyintoni isizathu UYesu wawuqalekisa umkhiwane, siza kuchaza imiyalezo nganye ukuze uyiqonde.
1. Abo bathandaza ngokholo baya kuyibona imimangaliso
Abo bathandaza ngokholo baya kubona imimangaliso
UYesu wasibonisa loo nto Nabani na okholwayo kuThixo nakwiLizwi lakhe uyakwazi ukwenza nawuphi na ummangaliso. Yayingekuko ukubonakalisa nje amandla kaThixo, kodwa yasibonisa ukuba yeyiphi indlela ekumele siyilandele ukufezekisa konke esikucebayo ngoncedo lukaThixo.
Le ndinyana ilula isinceda ukuba sikuqonde oko Amandla akhe akafumaneki yedwa, kodwa avela elukholweni. Ke ngoko, ukulandela umendo wakhe, kufuneka sibe nokholo kuThixo ngaphezulu kwayo yonke enye into.
2. Abo bangavelisi ziqhamo baya kohlwaywa
Abo bangavelisi ziqhamo baya kohlwaywa
Kwakungeloxesha lamakhiwane, kodwa uYesu wayekulindele ukufumana amakhiwane. Eminye imikhiwane ithwala isiqhamo kwaphambi kwexesha. Umkhiwane onamagqabi akhulileyo ubusele unamakhiwane aluhlaza. Umkhiwane uYesu awawuqalekisayo wawunamagqabi kodwa ungenaziqhamo. Inkangeleko yakhe yayikhohlisa, wayekhangeleka ekhulile, kodwa wayengekho.
Ejongene nale meko, uYesu wenza umzekeliso ngomkhiwane ongenaziqhamo:
Indoda yatyala umkhiwane esidiliyeni sayo. Nangona kunjalo, umkhiwane wawutyaliwe kangangeminyaka emithathu kwaye awuzange uvelise siqhamo. Apho umlimi wayecinga ukuba, ukuba emva kweminyaka emi-3, umkhiwane awukavelisi siqhamo, ungoko kungcono ukusika ukuze ungawusebenzisi umhlaba obudlayo.
Wathetha ke lo mzekeliso: Ubani wayenomkhiwane, utyelwe esidiliyeni sakhe; weza efuna isiqhamo kuwo, akafumana nto.
Wathi ke kumsebenzi-sidiliya: Uyabona, ndiminyaka mithathu ndiza ndifuna isiqhamo kulo mkhiwane, ndingafumani nto; yinqumle; Kutheni ikwenza umhlaba ungabinamsebenzi?
Ngalo mzekeliso, uYesu wasichazela ukuba, njengomkhiwane, kufuneka uvelise iziqhamo. Koko kukuthi, UThixo unika ixesha, kodwa kungekudala okanye kamva, abo bangaguqukiyo kwizono zabo baya kohlwaywa.
Kusuku olungaphambi kokuqalekisa umkhiwane, uYesu wayengene eYerusalem, ekhuthazwe sisihlwele. Abantu babebonakala bekulungele ukwamkela uYesu kwaye batshintshe ubomi babo, kodwa kungaphelanga neveki, babemfuna uYesu! Babenjengomkhiwane oqalekisiweyo, babonakala belungile, kodwa bengavelisi ziqhamo. Inkangeleko yakhe yayikhohlisa.
Baninzi ke bendlala iingubo zabo endleleni, baye abanye bexhuzula amahlamvu emithini, bewandlala endleleni.
Baye abo babehamba ngaphambili, nabo babelandela, bedanduluka, besithi, Hosana; Makabongwe lo uzayo egameni leNkosi!
! Mabubongwe ubukumkani bobawo wethu uDavide, obo buzayo! Hosana enyangweni!
UMarko 11: 8-10
Nabani na osindiswa nguYesu uthwala isiqhamo. Awuhlali uthanda isono kwaye uguqula ubomi bakho. Iziqhamo zayo zisenokuba luhlaza zincinci, zifihlwe phakathi kwamagqabi, kodwa zikhona. Abanye abantu banokubonakala ngathi bayamthanda uYesu, kodwa abaguqukanga kwaye ke ngoko abasishiyi isono.
Velisani ngoko iziqhamo eziyifaneleyo inguquko;
Ngenye imini, umntu ngamnye uya kugwetywa nguThixo kwaye nabani na ongabonisi iziqhamo zobomi obuguqulwe nguYesu uya kohlwaywa. Ke ngoko, ikholwa ngalinye kufuneka lihlalutye ubomi balo kwaye libone ukuba kufuneka litshintshe ntoni. Ngoncedo lukaYesu, sinokuthwala isiqhamo esininzi.
Kube njalo! Siyathemba ukuba eli nqaku lifutshane likuncedile ukuba uqonde kwakutheni ukuze uYesu aqalekise umkhiwane. Sinamanqaku amaninzi aphendula imibuzo yebhayibhile. Njengokuba, kutheni besithi uYesu ngunyana kaDavide? Ukuba ufuna ukuqhubeka nokufunda ubufundisi ngendlela eyonwabisayo, sicebisa ukuba uqhubeke ukhangela Fumanisa kwi-intanethi.